B: Shell a ndụdụ nke Gnome | Site na Linux
B: Shell bụ ndụdụ Gnome
Kedu ka ị mere. Ọfọn ebe a ọzọ ma ugbu a na obere nyocha karịa anya karịa ihe ọmụma.
Izu ole na ole gara aga m kwuru na a post banyere ọdịnihu nke GNOME Shell na ihe bụ a Shell. Ọ dị mma, ịgagharị na Devianart m zutere onye Devianite Nwabueze ma achọpụtara m nke ahụ B: Shell (Plasma ndụdụ n'ụdị dị ọcha nke Cinnamon si Gnome Shell) na eziokwu bụ na o juru m anya na nhazi nke ikike a nke ndụdụ.
Dị ka Craazyt si kwuo, arụmọrụ nke ndụdụ a dị mma karịa na plasma na ọbụlagodi ka mma, na-ewepụghị mmetụta ahụ. N'ezie anwalebeghị m ya, mana ikwu eziokwu, a nwara m nke ukwuu ime ya wee hụ arụmọrụ, omume na nkọwa ndị ọzọ.
pawuda enwewo ihe ịga nke ọma maka ndị ọrụ Gnome nakwa na ha chọrọ inwe ụdị nke abụọ site na usoro ahụ, yabụ ana m achọpụta na BE ga-abụ nha nha ya KDE. Ọ bụ ezie KDE Ọ bụ gburugburu ebe anaghị ajụ onye ọ bụla ihe ọ bụla, o doro anya na ọ nwere ihe na-eme ka ọtụtụ ndị ọrụ ghara iru ala na nke ahụ bụ "ibu" ya (na-erepịakwa ọtụtụ akụrụngwa) na nke a yiri ka ọ ga-ahapụ inwe ike niile nke KDE na ebe dị mfe ma nwee ọfụma.
Ọ bụ ezie na mụ onwe m KDE mba m gusta (naanị mmasị) Site na ndụdụ a, ejirila m rafuo ka m tinye ya ma hụ ya ka ọ na-arụ ọrụ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ndabara ma ọ bụ ihe nkịtị, mana ụdị pawuda (B BE: Shell) maka KDE Ọ na-agwa m na ndị ọrụ ọrụ nke ndụdụ ndị a na-achọ ihe dị iche, nke a na-emezi, nke na-atọ ụtọ n'anya, nke na-eme ihe zuru oke nke desktọọpụ na nke kachasị mkpa, oriri na-edozi ahụ nke na-enye ohere kachasị anya nke ukwuu na arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » B: Shell bụ ndụdụ Gnome
Eziokwu bụ na ọ nwara m ọnwụnwa, mana m ga-aga n'ihu na-eji Plasma m n'ihi na kọmputa m na-akwado ya nke ọma ... N'agbanyeghị nke ahụ ọ dị ka ụzọ ọzọ magburu onwe ya ... Waoo ... Aga m anwale ya site na ịmata ihe!
N'agbanyeghị (¬_¬)… Ebee ka ịchọta ya?
https://blog.desdelinux.net/instalacion-y-configuracion-de-beshell/ <—— Hehe ebe a bụ mpempe akwụkwọ, gbaghara maka ọtụtụ okwu (naanị m na-ekwu) ...
Hmm, m nwuru-ike si KDE SC, "ihe ndị a dị egwu" anaghị eme ka m kwenye! (na ụda ochie curmudgeon).
Anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na 2013: ọ bụrụ na onye na-eme kọfị nke m ga-eji anaghị ejide KDE SC m na-etinye ụlọ zuru ezu mana kama iji Plasma m na-eji AwesomeWM na ọgwụgwọ dị nsọ 😀
Anọla m na-ekwu maka B:: Shell n'oge gara aga, lee ya anya 😛:
Eee, mana ọ bụrụ na o kwuteghị ya, amataghị m na ọ dị adị 😀! N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ezigbo onyinye na njikọ gị mejupụtara ya!
well ... Aga m aga n'ihu na-ekwesị ntụkwasị obi nye kde ebe ọ bụ na enweghị m mmasị n'echiche nke iji shea nke ukwuu ... enwere olile anya na kde anaghi eme ihe ohuru a ...
Ọfọn, ọ dị m ka ị ga-akwụsị iji KDE, n'ihi na Plasma bụ Shell xD
Eziokwu ahụ dị oke mma, echeghị m na ọ bụ ejiji, kama ọ bụ ihe ị ga-ahụ na ngwaọrụ ọ bụla n'ahịa.
Amaara m na Elav enyela nkọwa banyere ndụdụ a na eziokwu mgbe m hụrụ ka ha dọọrọ mmasị m na ọchịchọ ịmata oke mmepe ya dị ka mmetụta ya. Amaara m na Plasma bụ flagship nke KDE na eziokwu ahụ, dịka m kwuru, anaghị ajụ onye ọ bụla maka ihe ọ bụla yana maka nkọwa na nhazi atụmatụ ọ nweghị atụ. Ugbu a, ị ga-echeta na gburugburu desktọọpụ ma ọ bụ ndị njikwa windo bụ SHELL (plasma, gnome, wdg) nke na-enye anyị ohere iji akụrụngwa na njirimara nke otu anyị.
Na tammuz m na-ekerịta okwu gị ebe nke a abụghị ụdị ejiji kama ọ bụ ihe na-ewu ewu, ebe ọ bụ na iji ngwaọrụ ndị dị ka Mbadamba ụrọ na SmartPhones na-eme ka ọ dị mkpa inwe ihe "jikọrọ" (dị ka Apple na-eme) Ọ dịkwa mma ịkọ na enwere ụdị dị iche iche nke gam akporo maka PC (ọ ka bụ mmepe na nbipu usoro) ma weta gburugburu ebe obibi na PC (obere ma ọ bụ edozi) na-egosi na ihe na-agagharị ebe a.
Abụghị m onye isi nchịkwa na nkwukọrịta, mana ọ bụrụ na o doro anya, ruo n'ókè ụfọdụ, na "ụdị" a nwere ndabere ya, gịnị ka ọ bụ? Amaghị m. Ekwetaghị m na ihe ndapụta, mana ọ na-egbu mara na ọdịdị nke BE dị nnọọ ka GNOME Shell na ịbụ echiche ọjọọ ntakịrị; Nke a ọ bụ echiche iji dọta ndị ọrụ GNOME na KDE?, A na m ekwu n'ihi na ọtụtụ na-ahapụ ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ na-aga ọnwụ na ọrụ GNOME. Ka osila dị, ọ bụ atụmatụ ma anyị ga-ahụ ihe na-eme.
Mgbe m gụrụ akwụkwọ ọhụrụ banyere BE :: Shell (gụnyere nke a), echere m na a ghọtahie ọrụ a. Shei a enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ndị mmepe KDE ma ọ nweghị ọkwa dị oke mkpa. M ga-ekwu na ịdị adị ya bụ akụkọ n'oge ahụ, yana ojiji ya na-ejedebe na ndị ọrụ akọwapụtara nke ọma ka ha tinye aka na faịlụ nhazi.
Shei a na-eji ụfọdụ ọba akwụkwọ KDE eme ihe ma ọ naghị eweta ihe dịka Akonadi, Nepomuk na co, nke mere ka ọ bụrụ nhọrọ dị oke ọkụ, mana ọ bụ ntakịrị ejighị n'aka na "akaghi aka"; Onweghi ihe jikọrọ ya na ọrụ "gọọmentị" ma agaghị edochi ya ma ọlị. N'ihe kachasị mma, ọ ga-abụ ụdị ejiji Razor-Qt, karịa oge ma ọ bụrụ na ọ na-eto.
Onye dere ya, ya na nke windo Bespin, haziri sistemụ nke a ga-ahazi n'aka site na ịtọcha, mgbe echichi nke chọrọ nchịkọta mbụ. Ọ bụrụ na anyị elee anya na Deviantart ntakịrị, anyị ga-ahụ na enwere "isiokwu" a gbatịrị agbatị, nke bụ otu na nseta ihuenyo nke isiokwu a (yana m jiri obere oge mee onwe m), mana na nkọwa nke okwu ahụ, nke ọ bụla onye ọrụ nwere ike hazie ya ka ha jiri ya zuru oke ma kpụzie ya na oke elu. Mana, ana m ekwusi ike, ọ chọrọ ihe ọmụma nke imerime mmadụ enweghị yana na-atụfu ya n'anya neophyte.
Na nkenke, ọ bụ shei mara mma nke nwere ikike, mana ọ bụ ihe ọzọ na-ezubeghị ịlụ ọgụ na KDE, naanị iji nye gburugburu Qt nwere ike ịhazi.
Kedu maka Wolf.
Ekwenyere m na gị ma ọ bụ n'oge na-adịghị anya ikwu banyere nke a ka m na-ekwu, mana ana m echetakwa na LXDE nwere onye na-asọmpi na RazorQT.
M na-esokwa gị kenye echiche nke ịnye QT gburugburu nke nwere ike ịhazi ya nke ọma, n'ụzọ dị ịtụnanya "ihe yiri nke a" (apụtaghị m ihe kpatara Cinnamon ji dị) na Cinnamon na karịa, oge ọ bụla m hụrụ, ọ na-echetara m ọtụtụ gnome na ọbụna na oghere ma ọ bụ ihe ọmụma (n'ezie na ngwa ndị dị mkpa). KDE bụ maka m otu n'ime 2 kacha mma DE dị adị ma na site n'echiche ya enweghị nha anya. Naanị ihe m ga-anwa ikwu (na-enweghị imejọ onye ọ bụla) bụ na dị ka Microsoft na-arịọ maka ọtụtụ akụrụngwa iji ya rụọ ọrụ zuru oke (ana m ekwusi ike na ọ bụ naanị ntụnyere, amaara m na ị gaghị atụnyere ihe dị mma ya na ihe enweghi ya).
Naanị m chọrọ ime ka otu echiche gbara m gburugburu na-edebe ihe omume na omume mgbe ọ bịara ibi niche ahịa, n'ihi na ụlọ ọrụ ngwanrọ niile chọrọ isi obodo ma ọ bụ ego iji lanarị ma nye akụkọ. KDE nwere ikike QT nke ikikere ma anaghị m enwe obi abụọ na GTK nwere ihe nha ya, mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ịmata na echeghị m na ọ bụ ihe ndabara na mmepe ndị a bụ maka obi ụtọ ịbụ na ọ bụ ezie na ha anaghị asọ mpi. n'ihu ọha, ọ bụ ụfọdụ na ha oge ha ga- (dị ka Cinnamon ma ọ bụ Mate na nke Gnome Shell)
Mana echeghị m na ọ ga-akụ KDE 😀
Na, ma ọ bụrụ na ọ bụ dị ka ìhè dị ka cinnamon, ọ ga-abụ na-eche echiche.
Kedu maka kik1n.
Eziokwu nwere ike ịhazi ma nwee ike itinye ya na otu puku ụzọ (dịka ọmụmaatụ, ịhazi onwe (http://www.rafaelrojas.net/2012/09/01/archlinux-kde-en-la-netbook/) ma ị nwere ike ịnweta ọnọdụ dị oke egwu, dịtụ ntakịrị yana ụtọ onye ọrụ ya. Echere m (na nke a bụ echiche onwe onye) na ikwe ka a gbanwee aha ọzọ site na CSS ọkọlọtọ na ikekwe n'oge HTML5 na ihe ndị ọzọ, ga-eme ka ọtụtụ nhọrọ enyere maka ịhazi na ịmegharị nke ọma ịgbanwe maka ndị a. GNOME ejirila ya ma ọ bụrụ na (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya) webOS na-arapara na ya.
Ọ bụ ezie na BE enweghị ihe jikọrọ ya na KDE, o doro anya na ị na-achọ ụzọ ọzọ dị mfe iji nweta ya, ụdị Cinnamon dị ukwuu; n'ihi na ị na-ekwu eziokwu, ị ga-amata nke ọma labyrinth nke ndị ọzọ nke KDE na-enye ma ọ nwere ike inye karịa 1 ya "dizzy".
Ka anyị nwee olile anya na ọrụ a na-amị mkpụrụ, echere m na ọ ga-abụ ihe ọzọ na GNOME na Cinnamon na ọ nwere ike bụrụ ezigbo onye mgba maka Plasma na, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya.
Edemede ahụ kwuru na Be :: Shell bụ ndụdụ na nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ bụ ihe ọzọ, ọ bụghị ndụdụ Plasma.
Kedu ihe Windóusico.
Ọ dị mma, Cinnamon na Mate bụ ụzọ ọzọ Gnome Shell ha si kpọọ ha ndụdụ. Anyị nwekwara ike ịsị na RazorQT bụ ndụdụ nke LXDE ebe ọ bụ gburugburu QT na-eji OpenBox (otu dị ka LXDE).
Echere m na ọ bụ ihe gbasara okwu mmụta karịa nke isiokwu, ọ bụ eziokwu ma n'otu oge ahụ ọ bụghị, ihe niile dabere na ojiji ị nyere nke nkọwa okwu na ihe okwu eji. M na-ekerịta echiche gị na akụkụ ebe ọ bụ na ọ bụ «ọzọ» na Plasma ebe ọ na-enye ụzọ ọzọ iji hazie na KDE dị mma (ana m ekwusi ike, plasma dị ịtụnanya ma ọ nweghị nha anya ma rịba ama ihe onye ọrụ GNOME kwuru) na n'otu oge ahụ ọ bụ ndụdụ n'ihi na ọ na-erigbu obi nke KDE kachasị na-enweghị iji ndabara Shell nke KDE (Plasma) dị ka Cinnamon, Mate na Unity na GNOME 3.
Ndewo Jorge. Nkwupụta a na-ezo aka n'eziokwu ahụ bụ na ndụdụ nwere ezigbo ihe pụtara na mgbakọ:
Cinnamon bụ ndụdụ nke GNOME Shell na Mate bụ ndụdụ nke GNOME 2. Nwee :: Shell abụghị ndụdụ Plasma (ọ naghị eji koodu isi iyi Plasma). Nwere olileanya na njikọ Wikipedia na-akọwa ihe m na-ekwu.
Ekwenyesiri m ike na gị, ọ bụ ya mere m ji zoo aka n'okwu okwu na ojiji enwere ike inye ya, nke ka mma ma ọ bụ nke ka njọ.
M kwughachiri na nkwupụta gị zuru oke, mana m na-enyocha ntakịrị ma hụ karịa koodu isi, aghụghọ nke BE na-egosi yana ojiji nke nhazi banyere KDE iji nwee ike iji BE. Enweghị m ike ikwubi ihe ọ bụla mana mana m nwere ike ikwu: Windóusico 1 gị akwa nhicha 0 (hehehe).
Daalụ maka iwepụtara oge iji dokwuo anya na m na-ezitere gị ezigbo ekele m.
Oo wouuuu ma ọ bụrụ na okomoko a 😀
Dị mma nke ukwuu na foto na ndị ọzọ…. mana n'oge ahụ eziokwu, na omume ọ jọgburu onwe ya. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ otú m si hụ ya mgbe m nwara ya ihe dịka izu 3-4 gara aga. O gabu na m ji kde ugbua 😛
Ọfọn, ọ bụrụ na ị rịtuo Lamborghini Aventador wee banye n'ụgbọ okporo ígwè na-aga ebe Constitución (Bs.As., Argentina) enwere ihe dị iche… dị ịrịba ama 😛
Maka nbudata Firefox 16: Lekwasịrị anya na ndị mmepe
Etu esi eji Skype na ọmịiko